TAA BỤ ỤBỌCHỊ NDỊ AKA EKPE – hoo!haa!!
TAA BỤ ỤBỌCHỊ NDỊ AKA EKPE
Abalị iri n’atọ nke ọnwa Ọgọọst afọ ọbụla bụ ụbọchị ndị aka ekpe.
Ndị mba ụwa wepụtara ụbọchị taa maka iji cheta ụmụ nwanne anyị ndị gbara iche.
E ji ụbọchị a echeta ihe ha na-agabiga. Ihe nile a na-arụpụta bụ maka ndị aka nri e nweghị nke ndị aka ekpe.
Site n’obere ihe dịka akwụkwọ eji ede ihe (exercise books) na mkpa (scissors) ruo nnukwu ihe dịka ụgbọala, ha abụghị maka ndị aka ekpe.
Gịnị kpatara ya. Ndị aka ekpe nọ n’ụwa dị sọọsọ ihe dịka kwa narị iri n’otu (11%). Nke a pụtara na ọnụ ọgụgụ ndị aka ekpe n’ụwa taa dị ihe dịka nde narị asaa(700 million). Ya mere ọ ga-ahịa ahụ ịrụtara ha ihe ọbụla iche.
Banyere ihe mere ụfọdụ ji emere aka ekpe ndị ọkachamara nwere iwu ha ji kọwaa ya a kpọrọ iwu “Homo loquens hypothesis” nke na-ekwu maka akụkụ ụbụrụ na-ahụ maka Aka nri.
Ihe na-elekọta akụkụ aka nri n’ahụ mmadụ bụ akụkụ aka ekpe n’ụbụrụ bụkwa akụkụ na-ahụ maka asụsụ.
Ọtụtụ ndị oke mmadụ n’ụwa bụ ndị aka ekpe. Na Naịjiriya, otu onye àmà ámá bụ onye aka ekpe bụ Ọkaiwu Babatunde Raji Fashola, onye bụbu Gọvanọ Legọs Steeti nakwa Mịnịsta na-ahụ maka Ọkụ Latrik, Ọrụ nakwa ìwù ụlọ n’agha mbụ nke ọchịchị Buhari.
Mmadụ ise n’ime ndị isiala asatọ ikpeazụ nke mba Amerịka ji aka ekpe ede ihe. Ha gụnyere Barack Obama, Gerald Ford, Ronald Reagan, George HW Bush na Bill Clinton.
Ndị ọzọ na-ewu ewu na-eme aka ekpe gụnyere Jamie Murray na Martina Navratilova (ndị ọka ibe n’egwuregwu tennis), Nịkọla Tesla(onye ọkachamara Fiziks) nakwa Ọkpara eze Chals nke Mba Ịnglandị.
Ọtụtụ ndị na-eme aka ekpe na-ejinwukwa aka nri eme ihe ụfọdụ. Sọọsọ mmadụ ole m’ole n’ụwa bụ ndị aka ekpe n’anaghi ejinwu aka nri ha eme ihe ọbụla.
Dịka ọtụtụ ndị aka ekpe ndị ọzọ, aka na-ede ihe a ugbua na-emekwa aka abụọ mana ọ bụghị onye ohi.
Biko, ị hụ onye aka ekpe, kelee ya maka na ọ bụ onye Chineke kere n’ụdị pụrụ iche. Nwa gị bụrụ onye aka ekpe, hapụ ya ọ bụghị arụ. I sowe ya n’ike, i nwere ike kwarụọ ya ahụ nke na ọgụgụ isi ya agaghị adịchazi nkọ ka chi ya si kee ya.
Previous Post: ỌKỤ AGBAGBUOLA NWOKE JI NWANYỊ N’ELU ENYI YA NWANYỊ
Next Post: ASABA:ONYE DPO A TỌỌRỌ AKWỤỌLA N3M EGO MGBAPỤTA